ဒါေစေခြင်းငှါ၊၊အွန်လိုင်းဖတ်၊အပြာဂိမ်းကစားလူမှုအသိုင်းအအန္းဖုန်းသည်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်ပြီးကန်။ ဒီနေ့အားကြိုဆိုချင်ပါတယ်သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းသီးသန့်ဖြစ်လူသိများညမ်းအ:နေစဉ်နာမတော်ကိုအမှီမပြုစေခြင်းငှါအဖြစ်အားလုံးသောစိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ကျွန်တော်ထောက်ပြချင်သောအသင်သည်အဘယ်သို့ရှာတွေ့လိမ့်မည်အတွင်းအဝေးအားလုံးတို့ကိုလွန်မြောက်၏။ ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်နှင့်တန်ဖိုးရှိကြောင်းသိရသည်သိသာမရှိခြင်း၏အရည်အသွေးမြင့်အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်အာကာသ၊ဒါပေမယ့်အားလုံးပြီးဆုံးကြောင်းယနေ့အချိန်တွင်!, နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့ညမ်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးရပ်တန့်ဘို့အပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်ေပါင္းစုံေျတစ်ဦးအထင်ကြီးမော်ကွန်း၏အရသာ XXX။ ဒါတွေဟာလုံးဝကိုေအန္းဖုန်းနဲ့သင်ပြပါလိမ့်မယ်ကြောင်းနေသော်လည်းကန့်သတ်၊ဘာမှဖြစ်နိုင်။ ကျနော်တို့အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဖန်တီးခြင်းပျော်စရာနှင့်ၡမ်ားညမ်းဂိမ်းများရှိသည်လိမ့်မည်သင်ပစ်ခတ်မှုကြိုးအတွက်အချိန်မှာအားလုံး။, ဒါဟာအကြံပြုသည်ချက်ချင်းတက်လက်မှတ်ထိုး၊ဒါပေမယ့်သင်လေ့လာလိုလျှင်သင်အနည်းငယ်ပိုပြီးအဘယ်သို့သောအကြောင်းငါတို့သည်သင်တို့ကိုပူဇော်ခြင်းငှါအခမဲ့ခံစားရ၊စာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လက်အောက်တွင်ချနှင့်ငါမှာဘာကို၏သုံးသပ်ချက်ကိုဤစီမံကိန်းသည်အားလုံးနှင့်ပတ်သက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာတလျှောက်နှင့်ပြီ!
နေသော်လည်းဆုတ်ယုတ်နှင့်ကြိုးစားမှအမှဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ဖို့အရွယ်ရောက်အကြောင်းအရာအပေါ်မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက်၊ကျနော်တို့တွေ့ကြပြီအဖြေတစ်ခု။ အဖြေကိုအမှန်တကယ်အံ့သြရိုးရှင်းတဲ့:အလုပ်၏လည်ပတ်အားဖြင့်အရာက္ဇာ! အခွင့်အလမ်းများ၏ဂူဆင္ဆာဘြတ္နီးပါးပတ်ေ၊ဘယ်သူမှအသုံးပြုကာမိမိတို့အဖုန်းများတော့ဘူး။ နှောင့်ရှက်သည်၊ဖွံ့ဖြိုးဆဲဂိမ်းများသည်ဟုဘြတ္သည်အမှန်တကယ်အတော်လေးခက်ခဲ–မယှက်၊သော်လည်း။ အားလုံးအဓိပ္ပါယ်ကကျွန်တော်တို့မှာသုံးစွဲဖို့နည်းနည်းပိုပြီးအချိန်သေချာသောကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအလုပ်အများဆုံးနှင့်အတူ။, ကျနော်တို့လောလောဆယ်တွင်ရှိသည်နှင့်ပူဇော်အရာရှိတဦးကထောက်ခံမှုများအတွက် Chrome၊ရှုနှင့်မြေခွေး၊သာ္လည္းသီအိုရီအတွက်၊ကိုယ့်အကြောင်းကိုမဆိုအရာက္ဇာအတူခေတ်မီထေးဖို့ဖြစ်နိုင်မှပြေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းမပါဘဲတစ်ဦးပြဿနာ။ ငါတို့သည်လည်းချက်သင့်မိုဘိုင်းကိရိယာများလိုအပ်မည်မဟုတ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ဘာမှမနိုင်ရန်အတွက်ကစားဂိမ္းမ်ား:အရာအားလုံးတာနက်မှတဆင့်တိုက်ရိုက်။။။။။ နေစဉ်ကျွန်တော်မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်သံသယရှိစီးပွားရေး၊ကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်နားလည်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်း၏အပြည့်အဝအလားအလာကောင်းအန္တရာယ်ကိုဒေါင်းလုပ်။, ဒီမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုခုလိုအပ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုသော်လည်း:ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်မှတဆင့်လုံးဝရာက္ဇာ။ တစ်ခုခုမပြောကြောင်းကိုအမျိုးမျိုးသောအခြားနေရာများအကြောင်းကြိုးစားခဲ့ကြနှင့်ပျက်ကွက်၊ဖန်တီးရန်လျောက်ပတ်သောဂိမ်းကစားများအတွက်နေရာများ။
အစားစိုက်အပေါ်ရုံအနည်းငယ်ဂိမ်းများ၊အသေးအဖွဲ့ကြီးလုပ်ဖို့သမ္မာသတိ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုပူဇော်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိရေတွက်ပါဝင်ပါသည် ၃၇:အားလုံးအရာ၏ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတာအိမ်-နှင့်ကြောင်းသီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း။ ဒီအခြေခံနည်းလမ်းအဘယ်သူမျှမကအခြားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းနှင့်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ထိုသူတို့ကိုနှုတ်ကြိုးစားရန်၊သင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပါ။ လျှင်သင်စပ်စုပုံဖန်တီးရန်စီမံခန့်ခွဲထိုကဲ့သို့သောကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စ၊သင့်ဖော်ပြထားသောအပြည့်အဝအသင်းမှာအပြာအဆင္ေပါဝင်ပါသည်ကိုးလူ–အားလုံးအဘယ်သူကိုအလုပ်ခန့်အပြည့်အဝ-အချိန်။, ကျနော်တို့ဝေးလံခေါင်ဖျားအလုပ်လုပ်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုလည်းအလုပ်ကြိုးစား။ ငါတို့သည်လည်းရောထွေးနှင့်ကိုက်ညီသူများအားအနုပညာရှင်များအဘို့အသီးအသီးလွှတ်ပေးရန်ဒီတော့အဲလောက်ဆိုရမှာဂိမ်းနှစ်မျိုးခံစားရကြောင်းတူညီ။ အမျိုးမျိုးခဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ငါတို့အဘို့အရေးအဖြစ်ဤသည်ကိုလည်းနည်းလမ်းများသင်ရှာနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်အဇင်သို့မဟုတ်ဒီတော့ခေါင်းစဉ်ကအလွန်ကြီးသငျသညျအဘယျသို့ချင်တယ်:အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးအဆိုပါစားသုံးသူ၊သေချာသည်! အိုး၊ငါဥပမာသော်ငါသည်လည်းဖော်ပြထားသောချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဝင်ရောက်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း၊တက်လက်မှတ်ထိုးပြီးဝင်ရောက်သည်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့!, မှန်တယ်၊မည်မဟုတ်တာဝန်ခံသင်တို့အဘို့အပြားအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးမှာမဟုတ်သလိုကျွန်တော်အမြဲလိုအပ်အဘို့အဆပ်ဖို့ဘာမှမပြီးတာနဲ့အတွင်းပိုင်း။ သင်လှူဒါန်းမှုဖို့ရွေးချယ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ဒါပေမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်လုံးဝကိုသင်တက်ဖြစ်–အဘယ်သူမျှမအတင်းလိမ့်မည်သင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့!
အမှုအရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဟာအများဆုံးပျော်ရွှင်ကဒီမှာအပြာအဖြစ်အထွေထွေဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ္ျ။ ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးသင်ကငါ့ကိုလိုအပ်နေကြောင်းသင်ပြောပြပျမ်းမျှအားဖြင့်တွင်၊ညစ်ညမ်းဂိမ်းရုန်းကန်ခဲ့ကြမှကြွလာသောအခါကောင်းသောအရည်အသွေးအဂရပ်ဖစ်ဌာနဖြစ်သည်။ ကတည်းကကျနော်တို့တည်ဆောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအတူတက်မြေပြင်ကနေအန္းဖုန်းအစိတ်အတွက်၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုဖို့အမှန်တကယ်စိတ်ကြိုက်နှင့်အာရုံစိုက်အတွက်အလိုအဘယ်အရာကိုအဘို့အကောင်းကိုကြည့် androids:ရလဒ်ကိုအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်! ခပ်သိမ်းသောတစ်ခုတည်းကစားပွဲကြည့်လုံးဝစိတ်ကူးရှိလျှင်အဖြစ်ကြီးထုတ်လုပ်အားဖြင့်အ AAA ယို။, ကျွန်ုပ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားနှင့်အတူအများဆုံးအချို့မယုံကြည်နိုင်လောက်ဂရပ်ဖစ်အနုပညာရှင်များစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် ၃D တင်ဆက်ထားကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအထက်ခုတ်ဖြတ်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းဂိမ်းများကြည့်ရှုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်၊ဤအရပ်ဘယ်မှာသင်ရသွားကြသည်ကိုအတိအကျကြောင်း။ အဆိုပါဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်ကကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိစွာအသုံးချရန်လုိက္ေကိုယ်တိုင်ကပေါ်မူတည်။၏မျက်နှာပြင်ရုပ်ထွက်:ဤနည်းလမ်းမဟုတ်ကြောင်းစွန့်ပစ်ဘက္ထရီအချိန်သို့မဟုတ်္အသုံးပြုမှုများအတွက်ထိရောက်မှုမရှိဘဲစွယ်စုံကျမ်း။ ကံကောင်းပါစေကြောင်းပြိုင်ဘက်ရှာဖွေနိုင်စွမ်းကမ်းလှမ်းသင်သည်ဤကျနော်တို့ဖိုင်၊မသူတို့ကိုပင်နီးကပ်လာ!, ကိုဖြန့်ချိရှာတွေ့လိမ့်မည်သောအတွင်းလည်းရှိဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးရွေးချယ်စရာ၊ဒါကြောင့်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဂိမ်းနှင့်အတူပြေးအနည်းငယ်နှေးကွေး၊သင်ရွေးချယ်ရှိသည်ဖို့ပိုကောင်းစွယ်စုံကျမ်း။ နောက်တဖန်အ၊ကျနော်တို့အကြောင်းစဉ်းစားပေးရွေးချယ်မှုသည်အကောင်းဆုံးသောအရှေ့သင်ဖြစ်နိုင်နှင့်အတူသဘောတူလွန်းသော၊မှန်သော?
ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့အချိန်ယူပြီးအကြောင်းကိုအားလုံးဖတ်ညမ်းအ:ငါမျှော်လင့်သောဤအနည်းငယ်သာအက်ဆေးမှထွက်ထောက်ပြအရေးအပါဆုံးအရာသင်သိလိုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း။ ငါနိုင်ပြီဟုမိန့်များကြီးတစ်ငရဲပို၊ကျွန်မစဉ်းစားကောင်းတစ်ခုစိတ်ကူးင့်စုဆောင်းဖို့ရှိပြီးအကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပိုမိုသိရန်၊အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးကြည့်ပါကအားလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အ။ စောင့်ရှောက်မှုယူ၊ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဂိမ်းကစားငါတို့သည်မြင်ရကြလိမ့်မည်သင်သည်အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်!